Bilaha: May 2016
RayHaber 31.05.2016 Warbixinta Shirka
Waxaa la iibsan doonaa Soo Kordhinta iyo Dayactirka Qalabka Deminta Dabka SDH-PDH, NETWORK iyo F / O Qalabka Qalabka Tijaabada Qalabka Badan ee elektiroonigga ah ayaa la iibsan doonaa (TUDEMSAS) Adeegga Kirada Gawaarida ayaa la iibsan doonaa Qiimo [More ...]
Giant wuxuu u guuraa gaadiidka
Gaadiid weyn ayaa loo qaadaa gaadiidka: Liberalization in dhaqaalaha ayaa horseeday kacaan weyn ee qaybaha gaadiidka. Hawlgalkan, oo bilowday xilligii Oulal, ayaa kordhay ka dib markii 2002. Garoomada, Jidadka iyo tareenada-xawaaraha sare leh Turkey ayaa wada lala [More ...]
Gawaarida Eurasian ayaa soo afjartay dhamaadka
Tunnel-ka Eurasia ayaa u dhowaa dhamaadka: Ka dib Marmaray, Eurasian Tunnel ayaa sidoo kale soo dhowaanaya dhamaadka. Mashruuca taariikhiga ah, 15 ee u dhexeeya Göztepe Kazlıçeşme wuxuu hoos ugu dhici doonaa daqiiqadda. Ka dib Marmaray, markan waa Mashruuca Tunniinka Eurasia [More ...]
Shaqaalaha Belgian Railroad ayaa bilaabay shaqo joojin guud ee ajandaha (Video)
Shaqaalaha tareenka ee Beljimka waxay bilaabeen shaqo joojin guud ajendaha: Shaqo joojinta ay sameeyeen shaqaalaha tareenada ee looga soo horjeedo talaabooyinka caburinta ee Gobolka Walloon ee koonfurta Beljamka ayaa keenay in la joojiyo gadiidka tareenka maalinta shanaad ee wadanka. on Road ah [More ...]
Qeybta gaadiidka ee Faransiiska ayaa shaqo joojin ah
Qeybta gaadiidka ee Faransiiska ayaa shaqo joojin bilaabay: Duulista iyo shaqaalaha tareenka ee Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inay go'aansadeen inay shaqo joojin sameeyaan si aan rasmi aheyn. Mudaaharaadka sharciga cusub ee shaqaalaha ee Faransiiska [More ...]
Tareenka xawaare sare leh wuxuu imaanayaa İzmir, oo ah xajmiyad wanaagsan
Tareenka xawaaraha sare wuxuu sidoo kale ku yimaadaa Izmir, oo nasiib wanaag u ah: Raiisel wasaare Yildirim, Ankara, codka tareenka xawaaraha-dheer ee ka socda Afyon illaa Usak wuxuu la wareegayaa talaabooyin kalsooni leh. Tareenka xawaaraha dheer wuxuu sidoo kale ku yimaadaa Izmir, nasiib wanaag nasiib wacan. Ha u maleynin [More ...]
Gaari taariikhi ah oo uu leeyahay Abdulaziz Khan tareenka Athens: Matxafka Athens ee Tareenka, oo laga aasaasay 1979, wuxuu shaaca ka qaadayaa taariikhda tareenka dalka. Madxafka, halkaas oo tareennada loo adeegsado Griiga lagu soo bandhigay boqolaal sano ka hor, waxaa inta badan dalxiisayaal u badan. Museum [More ...]
1 oo ku dhaawacmay tareenka Tareenka Kütahya (Video)
1 ayaa ku dhaawacmay Tareenka Kütahya Tareenka: Wrecker ee shilka Booliisku waxay sameeyeen kormeer goobta shilka Gaari xamuul ah oo ku dhacay baabuurka Tareenka xamuulka qaada ee Kütahya wuxuu ku dhacay gaari, 1 dad ayaa ku dhaawacmay. Sida xogta lagu helay, [More ...]
3. Mashruucan wuxuu bilaabay mashruuca Bosphorus Bridge
Baabuur wadida tijaabada ah waxay ka bilaabatay mashruuca buundada Bosphorus: Ka dib shaqooyinka danta laga leeyahay ee Yavuz Sultan Selim Bridge, wadista tijaabada ayaa la bilaabay. 3 waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn taariikhda Jamhuuriyadda. Aasiya Mashruuca Buundada Bosphorus [More ...]
museum horeysay Turkey ee tareenka ee Sirkeci Tareen Station ah
museum Turkey ugu horeysay ee tareenka ee Sirkeci Station: Sirkeci Tareen Station in dhismayaasha taariikhiga ah ee Istanbul, waxaa marti Museum Tareenka ka. 11 sano ka hor furay madxaf horeysay Turkey ee tareenka, waxaa lagu hayaa in ka badan 400 qayb. [More ...]
Kadib bartilmaameedka meter ee Kadir Topbaş
Hadafka metrooga ee Kadir Topbaş: Duqa Magaalada Istanbul ee Magaalo Weynta Kadir Topbaş wuxuu soo jiitay indhaha mashruucyada tareenka dhulka hoostiisa ee Istanbul. deegaanka [More ...]
Sharraxaadda geed-geedeedka laga soo doorto Ankara
Sharraxaadda geedka ka dhacay Ankara Metropolitan: Sharaxa geedka ka dhacay Ankara Metropolitan. Ankara degmada Metropolitan, qayb ka mid ah geedaha at Bayar Celal ka Boulevard, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) waa laga gudbi doonaa by shaqada isgoyska sabab saaro [More ...]
TCDD waxay iibisaa hantideeda gobolka 5
TCDD 5 waxay ka iibisay dhismaha guryaha ee gobolka: TCDD waxay ka iibisay dhismeheeda dhismaha ee Batman, Kahramanmaraş, Malatya, Van iyo Bitlis ilaa 4 milyan 664 kun oo rodol. Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka TCDD Malatya 5. Agaasime Goboleed, [More ...]
MOTAŞ Mucaaradeeda Cusub ee Cusbooneysiinta
MOTAŞ oo leh Wajigeeda Cusboonaysiinta: Iyadoo la hirgalinayo sharciga ku saabsan adeegsiga gawaarida ku habboon gaadiidka naafada ah ee gaadiidka dadweynaha ee 2007, iibsashada gawaarida ku habboon helitaanka naafada ayaa laga bilaabay 2009. Maanta, 67% duulimaadyadeena waxay ku habboon yihiin helitaanka naafada. [More ...]